အာဖဂနစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ဒီသီတင်းပတ် အစောပိုင်း တာလီဘန်တွေ သိမ်းပိုက်ချိန် နိုင်ငံကနေ တိမ်းရှောင်သွားတဲ့ သမ္မတ Ashraf Ghani ဟာ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု (UAE) မှာ ရောက်ရှိနေကြောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲ UAE တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့ အာဖဂန်သမ္မတနဲ့ မိသားစုကို ကြိုဆိုခဲ့ကြောင်း UAE နိုင်ငံခြားရေးနဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ၀န်ကြီးဌာနက ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ UAE က အတည်မပြုသေးခင် အချိန်အထိ အာဖဂန်သမ္မတဟာ အိုမန်၊ တာဂျစ်စတန်၊ ဥဇဘကစ္စတန်နိုင်ငံ တခုခုမှာ ရောက်နေတယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။ ကဘူးမြို့တော်ကို ခုခံမှုမရှိပဲ သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ တာလီဘန်တွေ ရောက်မလာခင် တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲ သမ္မတ နိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါ။ (Act. Ashraf Ghani )
“ပြည်ပကို တိမ်းရှောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မရှိပေမဲ့ သွေးထွက်သံယို သတ်ဖြတ်မှုတွေ၊ မတည်မငြိမ် အခြေအနေတွေ မဖြစ်အောင် တိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီး၊ အခုအခါ UAE မှာ ရောက်နေပါတယ်။” လို့ နိုင်ငံက ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Facebook လူမှုကွန်ရက်ကနေ ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံက ထွက်ခွာချိန်မှာ ငွေကြေးအမြောက်အများ ယူဆောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေတာဟာ မမှန်ကြောင်းလည်း ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ သူပြောတာ မှန်၊ မမှန် အကောက်ခွန် အရာရှိတွေကို စုံစမ်းနိုင်တယ်လို့လည်း ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
အာဖဂနစ္စတန်နိုင်ငံကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၁ ခုနှစ်အထိ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ တာလီဘန်တွေကိုတော့ အမေရိကန်မှာ ၂၀၀၁ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် တိုက်ခိုက်မှုအပြီး အမေရိကန် ဦးဆောင်တဲ့ ညွန့်ပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက် ဖယ်ရှားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း လူပေါင်း ထောင်သောင်းချီ သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာ အာဖဂန်စစ်ပွဲကို အဆုံးသတ်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ မဟာမိတ်တပ်တွေ ရုပ်သိမ်းနေချိန် ဒီလထဲမှာပဲ ၁၀ ရက်အတွင်း တာလီဘန်တွေက အဓိကမြို့ကြီးတွေကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တာလီဘန်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အပေါ် အံ့အားသင့်မိကြောင်း အမေရိကန်သမ္မတ Joe Biden ကလည်း ဒီတပတ်ထဲမှာပဲ လက်ခံပြောဆိုလိုက်ပေမဲ့ တပ်တွေ ရုပ်သိမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မှန်ကန်ကြောင်းလည်း ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာဖဂနစ်စတနျနိုငျငံမှာ ဒီသီတငျးပတျ အစောပိုငျး တာလီဘနျတှေ သိမျးပိုကျခြိနျ နိုငျငံကနေ တိမျးရှောငျသှားတဲ့ သမ်မတ Ashraf Ghani ဟာ အာရပျစျောဘှားမြား ပွညျထောငျစု (UAE) မှာ ရောကျရှိနကွေောငျး ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာပဲ UAE တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောပါတယျ။ လူသားခငျြး စာနာထောကျထားတဲ့အနနေဲ့ အာဖဂနျသမ်မတနဲ့ မိသားစုကို ကွိုဆိုခဲ့ကွောငျး UAE နိုငျငံခွားရေးနဲ့ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ဝနျကွီးဌာနက ကွညောခကျြ ထုတျပွနျပွောဆိုလိုကျတာပါ။
ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ UAE က အတညျမပွုသေးခငျ အခြိနျအထိ အာဖဂနျသမ်မတဟာ အိုမနျ၊ တာဂဈြစတနျ၊ ဥဇဘကစ်စတနျနိုငျငံ တခုခုမှာ ရောကျနတေယျလို့ ခနျ့မှနျးခဲ့ကွပါတယျ။ ကဘူးမွို့တျောကို ခုခံမှုမရှိပဲ သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့တဲ့ တာလီဘနျတှေ ရောကျမလာခငျ တနင်ျဂနှနေမှေ့ာပဲ သမ်မတ နိုငျငံကနေ ထှကျပွေးသှားခဲ့တာပါ။ (Act. Ashraf Ghani )
“ပွညျပကို တိမျးရှောငျဖို့ ရညျရှယျခကျြ မရှိပမေဲ့ သှေးထှကျသံယို သတျဖွတျမှုတှေ၊ မတညျမငွိမျ အခွအေနတှေေ မဖွဈအောငျ တိမျးရှောငျခဲ့ရပွီး၊ အခုအခါ UAE မှာ ရောကျနပေါတယျ။” လို့ နိုငျငံက ထှကျခှာသှားပွီးနောကျ ပထမဆုံးအကွိမျအဖွဈ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ Facebook လူမှုကှနျရကျကနေ ပွောဆိုလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံက ထှကျခှာခြိနျမှာ ငှကွေေးအမွောကျအမြား ယူဆောငျသှားတယျဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါနတောဟာ မမှနျကွောငျးလညျး ငွငျးဆနျခဲ့ပါတယျ။ သူပွောတာ မှနျ၊ မမှနျ အကောကျခှနျ အရာရှိတှကေို စုံစမျးနိုငျတယျလို့လညျး ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
အာဖဂနစ်စတနျနိုငျငံကို ၁၉၉၆ ခုနှဈကနေ ၂၀၀၁ ခုနှဈအထိ အုပျခြုပျခဲ့တဲ့ တာလီဘနျတှကေိုတော့ အမရေိကနျမှာ ၂၀၀၁ စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျ တိုကျခိုကျမှုအပွီး အမရေိကနျ ဦးဆောငျတဲ့ ညှနျ့ပေါငျးတပျဖှဲ့တှကေ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျ ဖယျရှားခဲ့တာပါ။ ဒါပမေဲ့လညျး လူပေါငျး ထောငျသောငျးခြီ သဆေုံးခဲ့ရတဲ့ နှဈပေါငျး ၂၀ ကွာ အာဖဂနျစဈပှဲကို အဆုံးသတျပွီး အမရေိကနျနဲ့ မဟာမိတျတပျတှေ ရုပျသိမျးနခြေိနျ ဒီလထဲမှာပဲ ၁၀ ရကျအတှငျး တာလီဘနျတှကေ အဓိကမွို့ကွီးတှကေို ပွနျလညျသိမျးပိုကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
တာလီဘနျတှေ မွနျမွနျဆနျဆနျ ပွနျလညျသိမျးပိုကျလိုကျတဲ့အပျေါ အံ့အားသငျ့မိကွောငျး အမရေိကနျသမ်မတ Joe Biden ကလညျး ဒီတပတျထဲမှာပဲ လကျခံပွောဆိုလိုကျပမေဲ့ တပျတှေ ရုပျသိမျးဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြဟာ မှနျကနျကွောငျးလညျး ကာကှယျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။